MIUI Rom သုံးပြီး Google Service, Google Application သုံးမရသူများအတွက် ( update ) « XMS-MMF
MIUI Rom သုံးပြီး Google Service, Google Application သုံးမရသူများအတွက် ( update )
Redmi Note 2/2 prime >> http://www.mediafire.com/download/hhum3q5obtl0qwr/RedmiNote2_gapps-5.0.2_KoNyan.zip
Gapp လို့ခေါ်ကြတဲ့ google service အတွက်လိုအပ်တဲ့ အဓိက ဖိုင်၎ ဖိုင်ပါ1. Google Account Manager.apk2. Google Contacts Sync.apk3. Google Services Framework.apk4. Google Play services.apkအဲ့ဒီဖိုင်တွေရှိဖို့လိုတယ် ဒါတွေကတော့ Miui rom တွေမှာလိုတာလို့ပြောချင်တာပါ တခြားဟာတွေတော့မစမ်းဖူးတော့မပြောတတ်ဘူးဗျအဲ့ ၄ဖိုင်ထည့်ပြီး သုံးချင်တဲ့ apk တွေထည့်သုံးရင်ရပါပြီ ဥပမာ Google Play, Google Mail, Google Map.'
zip လိုက် flashရင် တချို့ versionတွေမှာ otaတင်မရတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကိုဖြည်ပြီး private appထဲကဟာတွေ တခုခြင်း အကုန်ထည့်ပါ။ 11:12:00 PM